Waxyaabaha saameeya tayada hurdada iyo sida loo hagaajiyo | Ragga Stylish
Waxyaabaha saameeya tayada hurdada
Ma ogtahay inay jiraan arrimo badan oo saameeya tayada hurdada. Markaad dhib ku qabtid inaad huruddo ama aad si joogto ah u soo kacdid habeenkii, awoodahaaga jireed iyo aqooneedba si weyn ayaa loo dhimi karaa inta lagu jiro maalinta..
Qof kastaa wuxuu rabaa in hurdadiisu ahaato mid deggan oo tayo leh, laakiin mararka qaarkood waxaa jira caqabado ka hortaga. Soo ogow waa maxay waxyaabaha saameeya tayada hurdada iyo sida loola dhaqmayo si ay u awoodaan inay si fiican u seexdaan habeen kasta.
1 Immisa saacadood ayaad leedahay inaad seexato?
2 Hurdadaadu ma tahay mid tayo wanaagsan?
3 Maxaa kuu diidaya inaad si fiican u seexato?
3.2 Iftiin iyo buuq
3.3 Qaadashada kafee
3.4 Furaash ku filan
3.5 Cunnooyinka hufan
3.6 Hurdada hurdada
Immisa saacadood ayaad leedahay inaad seexato?
Sida laga soo xigtay cilmi-baarista, waxa caafimaadka qabaa waa in la seexdo 7-8 saacadood maalintii. Saacadaha la seexdo waxaa jidhku u adeegsadaa ka soo kabashadiisa culeyska jireed iyo maskaxeed ee maalintii ku soo ururay.
Haddii aad seexato wax ka yar 7 saacadood habeenkii, hagaajinta jidhku waxay noqon doontaa mid aan dhammaystirnayn. Laakiin waa qalad in laga fikiro in badan, si ka wanaagsan. Tirada kuma xirna tayada. Xaqiiqdii, haddii aad seexato wax ka badan 8 saacadood maalintii, waxay u badan tahay in sababta ay tahay hurdo tayo liidata, taas oo kuu horseedda inaad u baahan tahay waqti dheeraad ah oo aad ku hagaajiso jirka.
Hurdadaadu ma tahay mid tayo wanaagsan?
Waa fikrad wanaagsan qof walba inuu helo hurdo tayo wanaagsan leh, maxaa yeelay taasi waxay ka dhigan tahay in subaxa jirkaaga la hagaajin doono. Si hurdadaada loogu tixgeliyo tayo wanaagsan, waa inay buuxisaa shuruudaha soo socda:
Waxaad seexanaysaa 30 daqiiqo gudahood ama wax ka yar
Waxaad ku seexan doontaa suuxdin ama kama kici doontid wax ka badan hal jeer habeenkii oo dhan
Haddaad toosto, waxaad dib ugu laabanaysaa hurdo 20 daqiiqo ama ka yar
Marka shuruudahaan la buuxin waayo, tayada hurdo waa la wanaajin karaa ama xumaan karaa. Taasina waxay ku leedahay cawaaqib xumo hawl maalmeedkaaga, maxaa yeelay waxay kaa dhigeysaa inaad dareento daal ahaan iyo maskax ahaanba.
Maxaa kuu diidaya inaad si fiican u seexato?
Haddii aadan si fiican u seexan karin, mid ka mid ah arrimaha soo socda ayaa sabab u noqon kara:
Walaaca iyo walbahaarka ayaa ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee hurdo la’aanta. Haddii aad u maleyneyso in arrimahan ay ka dambeeyaan tayadaada hurdada oo liidata, waxaa jira farsamooyin nasasho badan oo kaa caawin kara yareynta dhibaatada. Waxa ugu muhiimsani waa in la isku dayo in arrimuhu tartiib tartiib u socdaan inta lagu jiro maalinta.
Markay soo dhowaato wakhtiga jiifka, wax yar ayaad akhrin kartaa, neefsashada diaphragm-kaaga, ama ku tababaro farsamo nasasho oo hore kuugu soo shaqaysay.
U tag dhakhtarkaaga haddii walaaca iyo walbahaarku sii socdaan.
Iftiin iyo buuq
Dhammaan arrimaha saameeya tayada hurdada, iftiinka iyo buuqa ayaa ka mid ah kuwa ugu muhiimsan. Waana taas waa saaxiibo aad u xun guriga sababo cad awgood, markaa isku day inaad ka tagto ama aad yareyso inta ugu badan ee suurtogalka ah (xor u ahaw inaad isticmaasho qalabka dhegaha la isaga saaro si aad uga fogaato buuqa haddii loo baahdo).
Meel xasilloon, nidaamsan oo aan lahayn mashquulin nooc kasta ah ayaa ah jawiga ugu habboon ee lagu nasto. Sidaa darteed haddii aadan si fiican u seexan, tixgeli baaritaanka qolkaaga jiifka si aad u aragto haddii ay jiraan wax aad sameyn kartid si aad ugu horumariso arrintan.
Qaxwada waxay leedahay faa iidooyinkeeda maalintii maxaa yeelay waxay kicisaa nidaamka neerfaha. Laakiin waxa ka dhigaya kafeyn si aad u xiiso badan subaxa hore waxay kaa hor istaagi kartaa inaad gaarto xaalada dabacsan ee loo baahan yahay inaad seexato habeenkii.
Bixinta qaxwada gebi ahaanba waa khiyaano, laakiin Haddii aad u maleyneyso in kafeega uu saameyn ku yeelanayo tayada hurdadaada, waa fikrad fiican inaad tallaabooyin qaadatid:
Cab qaxwaha kafeega leh
Iska yaree tirada koobabka maalintii
Yaree kafee ilaa subaxda si saamaynteeda ay gebi ahaanba uga dhammaato waqtiga aad seexanaysid
Ku beddel qaxwaha kuwa kale cuntada tamarta
Furaash ku filan
Nasasho la’aantaada habeenkii miyay si dhow ugu xiran tahay garabka iyo dhabar xanuunka? Xaaladdaas, cilladda tayadaada liidata ee hurdada waxay noqon kartaa joodariga. Waxay noqon kartaa mid aad u da 'weyn ama aan ku habboonayn baahidaada.
Beddelashada joodariga waxay u taagan tahay kharash aad u badan, sidaa darteed waa in aan si fudud loo samayn. Si fiican u fiiri dhammaan xulashooyinka si aad u hesho furaashka kuugu habboon. Cusboonaysiinta barkinku wuu ka jaban yahay mararka qaarkoodna wuu shaqeeyaa. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa lagugula talinayaa inaad bedesho furaashka 10kii sanaba mar iyo xitaa kayar, iyadoo kuxiran xaaladdeeda.
Maaddaama dheef-shiidka culus uusan si sax ah kor ugu qaadin nasashada, cuntooyinka waaweyn waa in laga fogaadaa intaadan seexan. Si kastaba ha noqotee, cunnadu had iyo jeer ma ahan cadowga hurdo tayo leh. Nooca cuntada iyo waqtiga ayaa door muhiim ah ka ciyaara. Cunnooyinka fudud qaarkood ayaa kaa caawin kara inaad hurudo, gaar ahaan haddii aad ku gaajooday cashada.
Dhinaca kale, waxaa jira cilmi baaris muujineysa in cunnooyinka karbohaydraytka badani ay faa'iido u leeyihiin hurdada. Sirta ayaa noqon doonta in dhowr saacadood ay dhex maraan inta u dhaxeysa cashada iyo waqtiga jiifka.
Tayo xumida hurdada waxaa sababi kara cillad. Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee hurdada. Haddii aad si xarago leh u hindhiso subaxdiina ma dareemaysid nasasho sidaad u baahan tahay, waxaa laga yaabaa inaad qabto hurdo la'aan. Ballan la sameyso dhakhtarkaaga haddii aad u maleynaysid inaad qabtid hurdo la'aan ama cillad kale oo hurdo la'aan si daaweynta ugu habboon loo bilaabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waxyaabaha saameeya tayada hurdada